MgHla's Diary (မောင်လှ ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ): မောင်လှ ပြန်လာပြီ...
Posted by MgHla at 4:51 pm
သင်္ကြန်တွင်း ထွက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ခရီးမှာ အတူနေ အခန်းဖော် ဘကြီး ၂-ယောက်ဆီ သော့ပါသွားလို့ အိပ်စရာနေရာမရှိလို့ ရုံးက မန်နေဂျာ တစ်ယောက်ရဲ့ အခန်းမှာ ကပ်နေရင်း ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ တံခါးဘောင်ပေါ် ကပ်တင်ပြီး ရိုက်ထားတာပါ... shutter speed မတူအောင် ထားရိုက်ထားတဲ့ ပုံ ၅-ပုံကို Photoshop ထဲက Merget to HDR နဲ့ ပြန်ပေါင်းထားတာပါ...
ကဲ... ဘယ်မြို့ ဖြစ်မလဲ မှန်းကြည့်ကြပါဦး... မန္တလေး မဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်...
My Labels: Photo, Photoshop, Trip,
Labels: Photo, Photoshop, trip
the answer is China. rite?
ရွှေလီ မြို့ရဲ့ ညအလှ ဓါတ်ပုံကလေးလား ခင်ဗျာ
nhit kuu said...
ဦးမောင်လှရေ... ရန်ကုန်မြို့ဆိုရအောင်လဲ အဲလောက်ကြီး မစည်ဘူးနဲ့တူတယ် အဲဒီလိုအိမ်ကြီးတွေကို ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတော့ မြင်ဘူးတယ်.. =P ဒါပေမယ်.ဘယ်နေရာလဲတော့ မှန်းတတ်ဘူး...ဒါနဲ့စကားမစပ် အဲဒါဘယ်မှာလဲ ဟင်...???? =P
ဟုတ်တယ် ရွှေလီပဲ ဖြစ်မှာပါ
ဟေး.... ပျော်လိုက်တာ... ဒါပေမယ့်... ဝမ်းလည်းနည်းတယ...
ဖိုးဇော် ... ကဖေး ပီကာဆို နှင့် ကြွက်ကြော် -၃
D Corner V2 Robot သရုပ်ပြပွဲ